သံဝေဂ တခုတော့ရမိပါတယ် - APANNPYAY
Home / သရုပ်ဆောင်များ / သံဝေဂ တခုတော့ရမိပါတယ်
Apann Pyay 8:18 AM သရုပ်ဆောင်များ Edit
သူတို့နှစ်ဦးကို ဇာတ်ကားတော်တော်များများမှာ လူကြမ်းလူမိုက်နေရာကနေမြင်တွေ့ကြရမှာပါ။ လူကြမ်းသရုပ်ဆောင် ကိုမျိုးဝင်းက ကိူလူချောအဖွဲ့ရဲ့နာယကကျောက်ရိုင်းဦးအောင်မြတ်ကို သူ့ရဲ့ထိုးကြိတ်လို့ရတဲ့ငွေထဲက တတ်နိုင်သေ လာက်လှုခဲ့ပုံကို အခုလိုရေးသားထားပါတယ်။
ဒီနေ့ နယ်ကနေပြန်ရောက် တစ်နှစ်ကျော် လေဖြတ်တဲ့ဝေဒနာခံစားနေသော ကိုလူချောအဖွဲ့ရဲ့နာယကကျော က်ရိုင်း ဦးအောင်မြတ်ဆီရောက်??
မျက်ရည်တွေနဲ့ကြိုနေတဲ့သူ့ကိုတွေလိုက်တော့ရင်ထဲခံစားမိတယ် သူ့ရဲ့မျက်ရည်ဟာဝမ်းသာလို့ ကျတာ လားဝမ်းန ည်းလို့ကျတာ လား??.
သူသာသိမှာပါ မပြည့်စုံတဲ့အနုပညာသမားတယောက်ရဲ့ဘဝ ? ? ? ကိုယ့််တွေ့လည်းဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အတွေ်းကျေ န်ာနားလည်းခံစားမိလာတယ် သံဝေဂ တခုတော့ရမိပါတယ် ။ ကျနော်ရဲ့ထိုးကြိတ်လိုရတဲ့လုပ် အားခထဲကကိုယ့် တတ်နှိ င်သလောက်လျှုဒါန်းခဲ့ပါတယ်
လှုနိုင်တဲ့သူတွေစုံစမ်းပီးကူညီထောက်ပံ့လှုဒါန်းနိုင်ကြပါစေ။ Shareလေးတစ်ချက်နဲ့ အများသိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးကြ ပါအုန်းနော်။
Credit to မျိုး မြင့် အောင်